Eritrea oo beenisay in ay taageero siiso Mucaaradka Soomaaliya. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Eritrea oo beenisay in ay taageero siiso Mucaaradka Soomaaliya.
Eritrea oo beenisay in ay taageero siiso Mucaaradka Soomaaliya.
Dowlada Wadanka Eritrea ayaa waxaa ay beenisay in ay taageero siiso kooxaha mucaaradka ee ka dagaalamaaya gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ka soo horjeeda DFKM ah.
Ergayga Dowlada Wadanka Eritrea ee u fadhiya Qaramada Midoobay Araya Desta oo war qoraal ka soo saaray xafiiskiisa ayaa sheegay in aysan Dowlada Eritrea ku lug lahayn colaadaha iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
Ambassador Araya Desta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray xukuumada Uganda kaas oo ahaa in Dowlada Eritrea si deg deg ah lagu soo rogo Cunoqabatayn oo ay ku sheegtay in ay colaado hor leh ka abuurayso gudaha dalka Soomaaliya iyadoo ay taageerayso kooxaha mucaaradka.
Waxaana u sheegay in Dowlada Eritrea aysan weligeed taageero siinin dhinacyada isku haya talada iyo Siyaasada dalka Soomaaliya,aysan iminka diyaar u ahayn in ay garab siiso mid ka mid ah dhinacyada isku haya talada dalka Soomaaliya.
Wuxuu sidoo kale in Eritrea ay kooxda Al-Shabaab u aaminsantahay in ay qeyb ka qaadan karto xal u helista xaalada dalka Soomaaliya mustaqbalka dhow.
Ugu dambeynti waxaa u sheegay in Xukuumada Asmara ay diyaar u tahay in ay iminka wax ka qabato dhibaatada iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
Asbuuci aan soo dhaafnay ayay ahayd marki Madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki u sheegay in Beesha Caalamka ay cawaaqiib xoogan la kulmi doonaan hadi ay isku deyaan in ay cunoqabatayn ku soo rogaan dalka Eritrea.
Hore Safiirka Britain ee Qaramada Midoobay ayaa Golaha Amaanka horteeda ka codsaday in Cunoqabatayn lagu soo rogo dalka Eritrea oo u ku eedeyey in ay kaalin weyn ku leedahay xasilooni darida dalka Soomaaliya.